HomeWararka MaantaLaacibkii weynaa ee Emerson Oo Talo Waayeelnimo siiyey Pogba
Laacibkii weynaa ee reer Brazil ee khadka dhexe uga ciyaari jiray Juventus, Emerson ayaa talo muhiim ah siiyey xiddiga khadka dhexe ee Juventus Paul Pogba, kaas oo la hadal hayo in uu u wareegayo mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub.
Emerson oo u soo ciyaaray kooxo badan ayaa waxa uu u sheegay Pogba in uu khalad weyn samaynayo haddii uu ka tago kooxdiisa Juventus oo uu u wareego Real Madrid.
Emerson oo sannadkii 2006 ku biiray Real Madrid laakiin sannadkii xigayba ka tegay markii uu ku guul darraystay in uu saldhigo ayaa waxa uu yidhi: “Pogba ma aha in uu sameeyo isla khaladkii aan anigu sameeyey oo kale. Waa in aad ka mid noqon karto kooxda koowaad marka aad ku biirto naadi cusub, isaguna (Pogba) waxa uu sumcad ku leeyahay Juventus oo ay tusaaleyaal u yihiin Andrea Pirlo. Laba jeer ayaan ka fikiri lahaa inta aanan gaadhin go’aan aan Juventus kaga tegayo oo aan ugu wareegayo Madrid” ayuu yidhi Emerson oo u warramay Tuttosport.
“Kaliya in aad koobab ku guuleysato lagaama doonayo Real Madrid. Taageeereyaashu waxyaabo badan ayay kaa rabaan, waxa ay mar kasta filayaan in ciyaartoyga cusub uu isbeddel ku sameeyo kooxda, waanay ka sii badan tahay dalabkoodu marka aad ugu wareego lacag €100 million ah.” Ayuu raaciyey Emerson.
Ewmerson waxa uu xusay in taageereyaashu ay markasta taageeri doonaan Cristiano Ronaldo laakiin ay ciyaartooyada cusub ku adkaan doonto in ay saldhigaan, iyadoo ay sababtuna tahay Real Madrid oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dunida.
Pogba oo ay da’diisu tahay 21 jir, waxa uu Juventus dhawaan u saxeexay heshiis uu kula joogayo illaa sannadka 2019, laakiin wakiilkiisa Mino Raiola ayaa markaas kadib sheegay in aanay waxba ka celinaynin Pogba haddii uu damco in uu koox kale u wareego.
Naadiyada Paris Saint-Germain, Chelsea iyo Manchester United ayaa dhamaantood lala xidhiidhiyey in ay doonayaan laacibkan.
Messi: Uruguay kubad inay nala ciyaaraan may doonayn
Tababaraha Valverde Oo Shaaciyey In Neymar Ku Negaanayo Barcelona
23/07/2017 Abdiwahab Ahmed